sosegado : လူသစ် အပိုင်း(၂)
Posted by sosegado at 11/27/2010 09:30:00 PM
လူတွေ အမိုက်တိုက်ကြီးထဲက ရုန်းထွက်နိုင်အောင်
လုပ်ရမဲ့တရားလေး...။
ဒါပေမဲ့ပို့ (စ)ထဲက အတိုင်း
တကယ်မဖြစ်ဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးနော်၊
ကျွန်တော်တို့အရိုးမဆွေံးခင်လေ...။
အဲဒီ DNA နဲ့ အိုဇုန်းလွှာပေါက်ကွဲမှုတွေကို တော်တော် စိတ်ဝင်စားနေတာ။
ဆက်စပ်သွားတာလေး တော်တော် စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတယ်။။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
လူသစ် တွေရဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေ၊ ပါရာဆက် တို့ရဲ့ သိပံဇာတ်လမ်းတွေ သီးသန့်ရေးပေးရင် ကောင်းမယ်၊
မမြင်ရပေမဲ့ သူ့တို့ အထဲက စွမ်းအားတွေလည်း အများကြီး ရှိနေသေးတယ်နော်။
လူသစ် . . . လူသစ်. . .
ပါရာဆက် သည် ဖာရာဖောဆက် နှင့် ညီအမတော်ပါသလား၊
ပါမန်း သည် ငမန်းနှင့် ဆက်သွယ်မှုရှိမရှိ ဖြေကြားပေးပါခင်ဗျား
အကြားအမြင်တွေကို ခန့်ခန့်ငြားငြားပုံဖော်နိုင်တာ လေးစားပါတယ်ဗျာ။ သိပ်ကောင်းတဲ့ ပို့စ်ပါပဲ။
ရင်ထဲမှာပေါ့ သွားသလိုဘဲခံစားရတယ်-အဆက်တွေသိပ့် မရေးနဲ့ ဗျာ-ရင်ထဲမှာအရမ်းခံစားရလို့ 
လူသစ်တွေနဲ့ ပါးမန်းတွေကို လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါတယ်. အဟောင်းထဲက ဖောက်ထွက်ဖို့ဆို အသစ်တွေကို ကြိုဆိုဖို့လဲ လိုအပ်ပါသေးတယ် မဟုတ်ရင် အဟောင်းထဲ တစ်ဝဲလည်လည်ဖြစ်နေဦးမှာ..
နောက်ဆုံးတော့ တရားကသာ လူ့လောကကြီးကို သာယာအောင်လုပ်ပေးနိုင်မယ် ထင်ပါရဲ့
မှန်တာဝန်ခံရရင် ခုမှကြားမိသိမိတဲ့ အကြောင်းအရာ
လေးတွေ တော်တော်များများပါတာမို့၂ ကြိမ်လောက်
ဖတ်ယူခဲ့ရပါတယ်။ ကျွန်မအတွက်တော့ ပညာပိုရသွား၊
မသိသေးတာတွေကို သေချာသိချင်လာတဲ့ ဆန္ဒတွေ
ပွားလာတာမို့ ဖတ်ရတန်မိတဲ့ Post ကောင်းလေးဖြစ်
ဒီဝတ္ထုကို သေသေချာချာ ဖြည့်ပြီး ရုပ်ရှင်ရိုက်နိင် ခဲ့ရင် သစ္စာလေးပါး တရားတော် ကို ကမ္ဘာက ပိုပြီး သိလာမှာပဲ။ လူအချင်းချင်း သတ်ဖြတ်တာ အကျင့်သီလဖောက်ပြန်လို့
ပါတ်ဝန်ကျင် တွေ ပျက်စီးတာကို ပီပြင်အောင် ဖော်ကျူး နိင်ခဲ့ရင် ဗုဒ္ဓတရားတော် ရေရှည်တည်တံ့နိင်မယ် ထင်တယ်ဗျာ။
စောင့်ထိန်းဘို့ဆိုတာ တကယ်တော့ မလွယ်ဘူး၊
တရားထဲမှာ ရှိပြီးသားနဲ့စိတ်ကူးပေါင်းထားတာပဲနော်...။
ဒါပေမယ့် အရိမေတ်တေယျ မပွင့်ခင်တော့ ကမာကြီးက မပျက်သေးဘူး
ဆုပ်ကပ်နှင့် တက်ကပ်.(သက်တမ်းတိုတာ ပြန်ရှည်လာတာ) ပဲရှိဦးမှာပါ။
10 နှစ်တန်းကနေ သီလပြန်စောင့်ရင် အသက်ရှည်လာဦးမှာ
ဘုရားတစ်ဆူနှင့် တစ်ဆူကြားထဲ ပစ်စေက ဗုဒ်ဓတွေလဲ ပွင့်ဦးမှာလေ...။ ကြားကာလက ကမ်ဗာငယ်ပဲ ပျက်ဦးမှာ...
အဲဒီလောက်ထိ မတွေးနိုင် မလုပ်နိုင်သေးပါဘူး၊
ရေးထားတာလေးက ကောင်းပါတယ်။ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် လူသစ်တွေ ပေါ်လာရင်တော့ ကြိုဆိုရမှာပေါ့...
ကွန်မကောင်းလို့ ကိုကြီးကျောက် မန့်တာဖတ်ပြီး ရီပြန်သွားပါတယ်
ကိုကြီးကျောက်ပြောသလို၊ နောက်ဆုံးတော့ အားလုံးဟာ အနတ္တ တွေပါပဲ။
အရေးသားကောင်းသလို စိတ်ဝင်စားစရာလဲကောင်းပါတယ်။ ဇာတ်သိမ်းမှ စဖတ်ဖြစ်လို့ တပိုင်းတစနဲ့ရပ်ပြီး အစက ပြန်ဖတ်မိပါတယ်။ တွေးအား၊ ရေးအားကို အားကျမိပါရဲ့..
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ ထူးခြားတဲ့ ၀တ္တုတိုလေးပါ။ လာဖတ်တာ နောက်ကျနေတဲ့ အတွက် ဆောရီးပါ။။